Vanogona maBloggi vanogona kuve Iyo Yechina Estate? | Martech Zone
Vanogona maBloggi vanogona kuve Iyo Yechina Estate?
Svondo, Kurume 8, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nobility ndiyo Yekutanga Estate, Chechi ndeyeChipiri, Vanhu ndivo veTatu… uye Utapi venhau hwaigara uchifungidzirwa kuti ndewechina Estate. Sezvo mapepanhau akatanga kurasikirwa nekufarira kuve imbwa yekutarisisa vanhu uye - pachinzvimbo - vachitarisa pundutso, vaparidzi vakatanga kutarisa utapi venhau sekuzadza pakati pezviziviso kwete chinangwa chehupenyu.
Tinoenderera mberi nekuona kupera kwemapepanhau kunyangwe hazvo tarenda rezvenhau risina kumbosiya - chete purofiti ndiyo yakasiya Iyo pepanhau kufa wachi anoenderera mberi. Ndiri kusuruvara kuona vatapi venhau vazhinji vane tarenda vachirasikirwa nemabasa. [Mufananidzo kubva kuThe Economist]
Paive nemutori wenhau pachiitiko chazvino chandakataura naye akandibvunza kuti munyika maizobloga nezvei kana aizotanga. Ndakamuudza kuti ndakatarisa kublogga uye kutapa nhau senzira mbiri dzekutaurirana dzakasiyana. Mune mawonero angu, blogger ndeye anogovera matarenda ake kana zviitiko online. Kublogga kunozivikanwa zvakanyanya nekuti kunodimbura mugadziri, mupepeti uye mutori wenhau… uye anoisa vateereri pamberi penyanzvi.
Saka chii chingave mutori wenhau nezve?
Ini ndakakurudzira kuti iye blog nezve utapi venhau. Vatori venhau vanhu vane tarenda kwazvo uye vane moyo murefu. Ivo vanogadzira nyaya dzavo nekufamba kwenguva, nebasa rakawandisa rakawandisa uye vachichera kuti vafumure chokwadi. Kunyangwe mabloggi achigadzira nhau nguva nenguva pakuve imbwa yekutarisisa, handitendi kuti pane kana mashoma anogona kuenderana netarenda rine vatapi venhau - kwete pakunyora chete, asi kufambisa mumatope kusvika pachokwadi.
Kana vamwe vatapi venhau vakagovana ruzivo rwavo rwekugadzira kwavo kuburikidza nebhurogu - uye kunyangwe imwe nzwisiso yenyaya dzenyaya dzavari kushanda - uye vopa mikana yekudzidzisa nekunyorera mabloggi, panogona kuve netariro yekuti iyo Fourth Estate igarepo. Ndinovimba kuti anotanga bhurogu uye otanga kudzidzisa iyo yese iyo blogosphere nezvekuti tingaite sei nani varindi.
Inyika inotyisa isina iyo Yechina Estate. Zviri pachena kuti midhiya edu makuru akasiya chinzvimbo chavo mwedzi yakawanda yapfuura sezviratidzo zvemadhora, vagovani, uye zvematongerwo enyika zvakakunda kukosha kwekutapa kukuru. Ini ndaivapo patakatanga kushambadza bepanhau kuti mangani maponi aivemo uye kwete vanyori venhau vane tarenda vawakapihwa mukana.
Geoff Livingston akanyora pakutanga kwegore rino kuti vezvenhau vevagari yaive The Fifth Estate. Zvichida ichokwadi, asi handina chokwadi chekuti mune imwe nzira tinokwanisa kutora basa rakadai kana mutoro.
Tarisa yako Yemukati Strategiki neGoogle Tsvaga Console
Kuchengeta Tab Maonero muGoogle Analytics